Kabani Riverside, Mananthavady - I-Airbnb
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguMahima
Indawo ikufuphi nomlambo, iifama zepaddy, izilwanyana zasendle kunye neelali zezizwe. Uya kuyithanda le ndawo ngenxa yembono, ububele kunye nokusingqongileyo okuzolileyo. Indawo ilungele izibini, abantu abahamba bodwa, iintsapho (kunye nabantwana), kunye nabahlobo abanoboya (izilwanyana zasekhaya).
Kule meko ye-COVID, izilumkiso ezicetyiswa ngu-Airbnb ziya kubakho.
Amaqela amancinane ka 2/3 angajonga nakwi ndlwana yaseWaterfront ekwifama enye
Le fama ixubene yee-Acre ezi-2 ibekwe ngaselunxwemeni lomlambo iKabani. Siyalima, ikofu, ipepile, amandongomane, iiareca nuts, icoco nuts kuquka nezinye iziqholo, imifuno nerayisi. IKabani Riverside ibekwe ecaleni kwendlela, ibonelela ngendlela elula yokufikelela. Kanye ngaphaya kwendawo esikuyo yimbumba yamafama angama-300 ePaddy, ebonelela ngokusebenza unyaka wonke kwiilali ezininzi zezizwe eziyingqongileyo. Ukuhamba kula mabala kunye naphakathi kwezizwe, kunika ihlabathi lokwenyani ukuva ubomi kunye nenkcubeko yeWayanad.
Ukutya okucokisekileyo kweKerala, izithethe zezizwe kunye nemisebenzi yezandla yalapha yongeza kwincasa yokuhlala kwakho apha. Yiyeke kuthi ukucwangcisa amava akho apha.
Mna ngokwam ndiyakuthanda ukuhlala ecaleni komlilo wam ebusuku apha ndithatha ingqele ehlala ebusuku.
Inani lamagumbi okulala # 2 + Iholo+INdawo yokutyela+Ikhitshi+Ngaphambili kunye ne-balcony yangasemva+ithala.
4.76 · Izimvo eziyi-81
Sikufuphi neTholpetty kunye neMupanga Wildlife reserves nelikhaya leentlobo ngeentlobo zezilwanyana eziquka iTiger. Ezi ndawo zogcino zinwenwele ngakumbi kwindawo yokugcina iTiger yaseRajiv Gandhi eyamiselwa phantsi kweProjekthi yeTiger.
Ngokungafaniyo nezinye iindawo, iWayanad ayiyondawo enye, isithili sayo siphela. Kukho inkitha yeendawo zokundwendwela eziya kuthi "Ukoyike" kwaye ngakumbi, kukho intaphane yemisebenzi ebandakanya uhambo olunomdla kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Mahima
Siza kukukhokela ngokuhlala kwakho apha. Nceda uzive ukhululekile ukuxoxa ngazo zonke iinkcukacha ezincinci kunye nathi.